Apple yakagadzira nezve zviuru makumi maviri zvemabasa muIndia | Ndinobva mac
Apple yakagadzira mamwe mabasa zviuru makumi maviri muIndia
Kutamisirwa kweApple mashandiro kuIndia kwakagadzira mamwe mabasa zviuru makumi maviri, mabasa acharamba achikura kusvika 2022, zvinoenderana nevapi vakasiyana.
Apple's supply chain yakakura kwazvo uye kwemakore yave iine zvakanyanya kutsamira kuChina. Dzvinyiriro kubva kune vatongi, vagovani uye zvematongerwo enyika zvepasi rose zvaka sundidzira Apple kutsvaga dzimwe nzira, imwe yacho iri India, kuwedzera neVietnam.
Sezvo huvepo hwaApple muIndia hwakura, huwandu hwekuvhurwa kwemabasa hwave kuwedzera. Sezvakataurwa Digitimes Asia, Apple yave iri honzeri huru ye kuumbwa kwemamwe mabasa zviuru makumi maviri munyika.
Aya mabasa akagadzirwa ne vatengesi vanogadzira uye vanounganidza zvigadzirwa mudzimba, senge Winstron naFoxconn. Huwandu hwevatengesi vanopa Apple hwaenda kubva saka 6 muna 2018 kusvika 9 muna 2020.
India yakapa zvimwe zvinokurudzira kune mamwe makambani ku fambisa kugadzirwa kwavo kuburikidza nechirongwa cherubatsiro inonzi Production Yakabatana Inokurudzira. Foxconn naWinston vakanyorera kurudziro uye vakavimbisa kuti kambani yega yega inotarisira kukura nevanhu zviuru makumi maviri nezviviri munaKurume 23.000.
Iyo posvo inoratidza kuti Mwero webasa weApple muIndia unenge uri wakanyanya dai COVID-19 yanga isati yaita mwaka wayo wese 2020. India yaona mafungu matsva ehutachiona munyika yese, zvichikonzera kunonoka nekushomeka kwevashandi pamwe nekuwanda kwemakakatanwa izvo zvakamanikidza kambani kuti ivhare kwenguva pfupi zvivakwa zvakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple yakagadzira mamwe mabasa zviuru makumi maviri muIndia
Matambudziko evamwe vashandisi veApple Kadhi Yemhuri neDaily Cash